देउवा भन्छन्– बहुमतको सरकारसँग निहुँ खोजेर मात्रै के गर्नु ? (भिडियो) – Nepal Press
देउवा भन्छन्– बहुमतको सरकारसँग निहुँ खोजेर मात्रै के गर्नु ? (भिडियो)
२०७८ वैशाख ५ गते १२:५०
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहुमतकै भएकाले निहुँ खोज्नुको अर्थ नभएको तर्क गरेका छन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको स्थितिमा सरकारको विकल्पबारे कुरा गर्नुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभएको पनि बताएका छन् । आइतबार आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा श्रीराम श्रेष्ठद्वारा लिखित कृति नेपाली जनजातीय संस्कार र संस्कृति विमोचन गर्दै सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभए पनि नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बनेमा पछि नहट्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर मरिमेट्ने कुरा पनि छैन । हामी प्रधानमन्त्री पदको लागि लालायित छैनौं । तर राजनीतिक परिस्थितिबाट यदी भोलि हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी पछाडी हट्दैनौँ ।’
प्रकाशित: २०७८ वैशाख ५ गते १२:५०